"Akazvarwa mhute ini: Humambo hwekupedzisira". Nzira yakanaka yekutanga naBrandon Sanderson. | Zvazvino Zvinyorwa
"Akazvarwa Mist I: Hwekupedzisira Humambo". Nzira yakanaka yekutanga naBrandon Sanderson.
Muhupenyu hwangu hwese ndakaverenga mazana emabhuku ekufungidzira (epic, rima, dhorobha, nezvimwewo), sezvo yakagara iri mhando yangu yandaifarira. Sezvazvinowanzoitika mune izvi zviitiko, pakasvika poindi apo nyaya dzese dzaiita sedzangu kwandiri. Ini ndakasangana neavamwe mavara uye mamiriro, iwo akafanana clichés (rwendo, chinhu chinobwinya, iro boka, rima ishe, iro mutengesi uye gamba dingindira…). Zvisinei, Humambo hwekupedzisira de Brandon sanderson, chikamu chekutanga chetatu trilogy Akazvarwa neMist (Mistborn), yakandiratidza kuti fungidziro haina kufa, asi iri mupenyu kupfuura nakare kose.
Ndichiri kunakirwa nesaga senge Rwiyo rwechando nemoto de George RR Martinkana Makoronike eMuurayi weMadzimambo de Patrick Rothfuss Muzuva ravo, havana kusiya chiratidzo chisingaperi pandiri. Ndine ndangariro irinani yaMartin yake yakasviba uye yechokwadi prose (kunyange hazvo aive asiri wekutanga kuishandisa mumhando yekufungidzira). YaRothfuss kwete zvakanyanya kune protagonist yayo Gary Stu kwaari zvinhu zvese zvinofamba zvakanaka, uye ane guvhu ndiyo musimboti wezvisikwa (pachezvangu, ndinoona rudzi urwu rwevatambi rwakaremera), kunyange ndichiyemura runyoro rwemagwaro avo. Muchidimbu: izvo zvakafanana vanyori vese ndezvekuti ini ndaifarira nyaya dzavo, asi havana kundimaka. Izvo hazvina kuita senge pandakatanga kuverenga ndiri mudiki Iyo Hobbit de Tolkienkana Vakanganwa Mambo Gudú de Ana Maria Matute. Chinhu chakaitika kwandiri, makumi emakore mazhinji gare gare, ne Humambo hwekupedzisira.
1 Icho chiri chechiedza chinonzi Brandon Sanderson
2 Kwemakore chiuru madota awira uye hapana chinotumbuka
3 Handipfugamire mwari wenhema
Icho chiri chechiedza chinonzi Brandon Sanderson
Kurova kwacho hakuna kuzorwadzisa nekuti kushungurudzwa kwakaitwa naRein nguva zhinji kwainge kwamuita kuti asimbe uye kumudzidzisa kutaridzika uye kuputsika panguva imwe chete. Neimwe nzira, kurohwa kwaive kuzvikuvadza. Mavanga nemavanga akapora, asi kurohwa kutsva kwega kwega kwakaita kuti Vin anyanye kuoma. Wakasimba.
Ndiri kunakidzwa nezvinhu zvakawanda nezve sanderson. Kutumidza mashoma, anoita kuti zviite sezviri nyore, anonyora zvakanyatsoita nenzira kwayo, uye anokwanisa kufema hupenyu hutsva mumhando iyo nhaka yaTolkien inorema kwazvo. Asi pamusoro pezvose, zvinondifadza izvo anofara nemashoko ake. Izvo hazvimbokusiye usina hanya. Iwe unonzwa mavara avo ari vapenyu, unogona kubata pasi ravanogara, kunyangwe rakasiyana papi neredu, uye haugone kumira kuverenga chitsauko mushure mechitsauko. Chido chechokwadi uye chinobatika chebasa rake chinogona kunzwika pane yega yega peji re Humambo hwekupedzisira.
Kwemakore chiuru madota awira uye hapana chinotumbuka
Dzimwe nguva ndinonetseka nezvekusava gamba iro munhu wese anofunga kuti ndiri.
Vazivi vanondivimbisa kuti ino ndiyo nguva, yekuti zviratidzo zvazadzikiswa. Asi ndinoramba ndichifunga kuti havana murume asiriye here. Saka vanhu vazhinji vanovimba neni… Vanoti ndine ramangwana renyika yose mumaoko angu.
Vaizofungei kana ivo vaiziva kuti shasha yavo, Gamba reNguva, muponesi wavo, aizvitongesa? Pamwe vaisazoshamisika zvachose. Neimwe nzira, ndizvo zvinonyanya kundinetsa. Pamwe, zvakadzika mumoyo mavo, vanokahadzika, sezvandisina chokwadi nazvo.
Ukandiona unoona murevi wenhema here?
Iwe unogona here kufungidzira zvingadai zvakaitika kana, chiuru chemakore apfuura, Sauron akakunda Hondo yeRin'i uye akazvipfekedza iye mwari-mambo weMiddle-pasi? Iyi fomati, zvakanyanya kutaura, inoshanda kuti inzwisise zvazviri Humambo hwekupedzisira kana usati wambonzwa nezvebhuku. Iyo nyaya nezve gamba uye kurwira zvakanyanya weboka re ska (vari pasi pevaranda) vachirwisana nevakuru, uye nehutsinye hunotyisa Ishe Mutongi. Nezve kupandukira kuzviuraya kupokana nehutongi hwehushe hwakaparara, uye kuyedza kuwana hupenyu papasi rinofa.
Guta re Luthadel, uko kwakawanda chikamu che "Iyo Yekupedzisira Humambo" inogadzirwa.
Handipfugamire mwari wenhema
"Waedza," Kelsier akapindura. Inzwi rake rakasimba, rakasimba rakanzwika munzvimbo iyi. Asi haugone kundiuraya, Ishe Anodzvinyirira. Ini ndinomiririra zvausati wambokwanisa kuuraya, kunyangwe waedza zvakadii. Ndini tariro.
Humambo hwekupedzisira inopfuura ingano yekufungidzira. Iri bhuku rine rimwe remashiripiti masisitimu (allomancy) zvinokwanisika, uye kuvakwa zvirinani, izvo zvandakakwanisa kuverenga. Inotarisawo kukura kwega kwemukadzi wechidiki. waini, mumwe wevashoma magamba anobuda mumifananidzo yeiyo genre, uye anoratidza kuve mukadzi akasimba asingarasikirwe nehukadzi (sezvazvinowanzoitika nguva dzese munyori paanoda kupa munondo kune hunhu hwechikadzi).
Tiri pamberi pebhuku rezvido zvakakwirira, zvekutambura kusingagumi, rudo runosiririsa, kuzvipira kwakashata, uye a fireproof kuda kuti simba mukati mekufa nekuparadza. Basa raSanderson rizere ne magamba asina kukwana, se Kelsier. Hunhu izvo, nekumanikidza kwechisimba chavo, zvicharamba zviri mupfungwa dzevaverengi kwenguva refu mushure mekunge avhara peji rekupedzisira. Kana iwe uchinetseka nezve chaiwo mafungidziro enganonyorwa, verenga Humambo hwekupedzisira de sanderson. Hauzombo nyadziswa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Fantasy » "Akazvarwa Mist I: Hwekupedzisira Humambo". Nzira yakanaka yekutanga naBrandon Sanderson.